Casio PRO TREK WSD-F21HR: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
Nhọrọ nke nche na Wear OS na-eto eto. Otu izu gara aga e gosipụtara Misfit Vapor X na ugbu a Ọ bụ Casio PRO TREK WSD-F21HR nke ewepụtara na ọkwa. Elekere a bụ elekere egwuregwu, ahaziri maka ndị ọrụ kacha arụ ọrụ n'ahịa. Yabụ na ọ ruru akụkụ na uto zuru oke, yana njiri egwuregwu egwuregwu.
Casio si otú a gbasaa nhọrọ nlele ya. Casio PRO TREK WSD-F21HR na-ahapụ anyị ọtụtụ mmelite, dịka ihe mmetụta nke obi, nke bụ ihe anyị na-ahụ n'ọtụtụ elekere taa. Na mkpokọta anyị nwere ike ịhụ na egosiri ya dị ka nche dị mma na nke a.
Nhazi nke elekere ahụ adịchaghị ma ọ bụ dị ka ndị ọzọ anyị na-ahụ n’ahịa. Dị ahụ na-ahapụ anyị ka anyị nwekwuo elekere egwuregwu nke yiri ka ọ kwadebere maka ụdị ọnọdụ niile. Ọ na-abịa na a sọrọ TFT ihuenyo, nke nwere akụkụ nwere agba na akụkụ monochrome.
1 Nkọwapụta Casio PRO TREK WSD-F21HR
Nkọwapụta Casio PRO TREK WSD-F21HR
Elekere batara na panel 1,32 inch TFT LCD na nha, na mkpebi nke 320 x 320 pikselụ. Na mgbakwunye, Casio PRO TREK WSD-F21HR a kwụpụtara maka ịnwe asambodo ndị agha, nke a ma ama MIL-STD-810. Nke a na-enye ohere ka ekpuo elekere ahụ ruo mita 50 n’omimi. Ihuenyo nche bụ capacitive, nke nwekwara GPS dakọtara na GLONASS na MICHIBIKI.
Banyere ihe mmetụta, anyị na-achọta onyinye dị iche iche. N'ime ha anyị nwere sensọ ikuku ikuku, elu, accelerometers, gyroscopes, compass magnet na ihe nyocha anya. Ọ bụ ihe mmetụta a na-ahụ maka ịchịkwa obi obi. Na nche anyị nwekwara vibrator iji nyefee amamọkwa. Ọzọkwa, Casio PRO TREK WSD-F21HR a na-abịa na igwe okwu ewuru na ya.
Banyere njikọta, abịa na Bluetooth 4.2, na WiFi. Elekere nwere ọtụtụ bọtịnụ, na mgbakwunye na bọtịnụ na gbanyụọ, anyị nwere bọtịnụ iji nweta map ndị ọzọ na-emepe ngwa ngwa. Batrị ekwentị na-enye anyị nnwere onwe nke ụbọchị 1,5, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ejiri ya dị ka elekere nkịtị, na-enweghị ọrụ amamịghe, anyị nwere ike iji ya ruo otu ọnwa, dịka akara a na-ekwu. Anyị nwere ike ịchaji batrị na awa 2,5. O nwekwara ihe nke 61,7 x 57,7 millimeters na ọkpụrụkpụ nke 16,8 millimeters. Ọ bụ ezie na ịdị arọ ya bụ gram 81 gụnyere mgbaaka.
Iji zụta elekere a, anyị ga-echere izu ole na ole. Casio PRO TREK WSD-F21HR ọ ga-aga ire ere na Septemba, dị ka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kwadoro. N’agbanyeghi n’enyebeghi ubochi di n’ime onwa a ka ewe zuta ya. A ga-emepe elekere ahụ na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ, yana ụlọ ahịa.
Maka ugbu a, ọnụahịa akwadoro bụ $ 499., ma anyị amaghị ego ọ ga-enwe na euro. N'ezie n'izu ndị a, anyị ga-amatakwu banyere elekere a mgbe ọ dara n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Casio PRO TREK WSD-F21HR: Egwuregwu egwuregwu ọhụụ na Wear OS
Mee ka asụsụ bekee gị dịkwuo ụtọ na asụsụ Grammarly, ngwa keyboard nke na-egosi nhọta dịka ị na-ede